Tsamba Yekutanga yaPetro 1:1-25
1 Ini Petro, muapostora+ waJesu Kristu, ndinonyora kuvagari vari kupfuura vakapararira muPontasi, Garatiya, Kapadhokiya,+ Ezhiya, neBhitiniya, kuvanhu vakasarudzwa 2 maererano nekuziva zvichaitika kwaMwari Baba,+ vanhu vakatsveneswa nemweya+ kuti vateerere uye vasaswe ropa raJesu Kristu:+ Wedzerwai nyasha nerugare. 3 Mwari uye Baba vaShe wedu Jesu Kristu ngaarumbidzwe, nekuti maererano netsitsi dzake huru akatibereka patsva+ kuti tive netariro mhenyu+ kuburikidza nekumuka kwaJesu Kristu kuvakafa,+ 4 kuti tive nenhaka isingaori isina kusvibiswa uye inoramba iripo nekusingaperi.+ Makaichengeterwa kudenga,+ 5 imi muri kuchengetedzwa nesimba raMwari kuburikidza nekutenda kuti muwane ruponeso rwakamirira kuratidzwa munguva yekupedzisira. 6 Izvi zviri kuita kuti mufare zvikuru kunyange zvazvo muchitambudzwa nemiedzo yakasiyana-siyana kwenguva pfupi, pazvinenge zvichifanira kudaro,+ 7 kuti kutenda kwenyu kwakaedzwa,+ uko kunokosha zvikuru kupfuura goridhe rinoparara pasinei nekuti rakanatswa* nemoto, kuzoita kuti pave nekurumbidzwa nekubwinya nekukudzwa pakuratidzwa kwaJesu Kristu.+ 8 Kunyange musina kumbomuona, munomuda. Kunyange musiri kumuona panguva ino, munotenda maari uye muri kufara kwazvo nemufaro usingatsananguriki uye unoshamisa, 9 pamuri kuwana mubayiro wekutenda kwenyu, iko kuponeswa kwenyu.*+ 10 Vaprofita vaya vakaprofita nezvenyasha dzamakaitirwa vakanyatsoongorora uye vakashanda nesimba vachitsvaga kunzwisisa nezvekuponeswa uku.+ 11 Vakaramba vachitsvaga kuti inguva ipi kana kuti mwaka upi wakanga uchiratidzwa nemweya waiva mavari nezvaKristu,+ pawaipupura nezvekutambura kwaizoita Kristu+ uye nezvekukudzwa kwaizotevera. 12 Ivo vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvishumiri pachavo, asi vaishumira imi pazvinhu zvamaziviswa iye zvino nevaya vakakuzivisai mashoko akanaka vachibatsirwa nemweya mutsvene wakatumirwa kubva kudenga.+ Ngirozi dzinoda kunyatsonzwisisa zvinhu izvi. 13 Saka gadzirirai pfungwa dzenyu kuita basa rakaoma;+ musatombovarairwa;+ tariro yenyu ngaive panyasha dzichaunzwa kwamuri pakuratidzwa kwaJesu Kristu. 14 Sevana vanoteerera, regai kuramba muchitongwa neruchiva* rwamaiva narwo pamakanga musina ruzivo, 15 asi ivai vatsvene pane zvese zvamunoita saiye Mutsvene akakudanai,+ 16 nekuti zvakanyorwa kuti: “Munofanira kuva vatsvene, nekuti ini ndiri mutsvene.”+ 17 Uyezve kana muchidana kuna Baba vanotonga zvichienderana nebasa remumwe nemumwe, vasingasaruri,+ zvibatei muchitya+ panguva yamuri vagari vari kupfuura. 18 Nekuti munoziva kuti hamuna kusunungurwa*+ nezvinhu zvinoora, nesirivha kana goridhe, pamararamiro enyu asingabatsiri akabva kumadzitateguru enyu. 19 Asi neropa rinokosha raKristu,+ rakaita seregwayana rakanaka+ uye risina kana pakaipa.+ 20 Chokwadi, akazivikanwa nyika isati yavambwa,+ asi akaratidzwa pachena pamugumo wemazuva acho zvichiitirwa imi.+ 21 Kuburikidza naye, imi muri kutenda muna Mwari,+ uyo akamumutsa kubva kuvakafa+ akamupa kubwinya,+ kuti kutenda kwenyu netariro zvive muna Mwari. 22 Zvino zvamakazvichenesa* kuburikidza nekuteerera kwenyu chokwadi, zvikaita kuti mude hama dzenyu zvisina unyengeri,+ dananai kwazvo zvichibva pamwoyo.+ 23 Nekuti hamuna kuberekwa patsva nembeu inoora,+ asi nembeu isingaori,*+ pachishandiswa shoko raMwari mupenyu, anogara nekusingaperi.+ 24 Nekuti “vanhu vese vakaita seuswa, uye runako rwavo rwese rwakaita seruva remusango; uswa hunooma, uye ruva rinowira pasi, 25 asi shoko raJehovha* rinogara nekusingaperi.”+ Uye “shoko” racho ndiro mashoko akanaka amakaziviswa.+
^ Kana kuti “rakaedzwa.”
^ Kana kuti “kwemweya yenyu.”
^ Kana kuti “muchitevera ruchiva.”
^ ChiGir., “kudzikinurwa.”
^ Kana kuti “zvamakachenesa mweya yenyu.”